Shan ka mid ah casriga ah jeebka yimaa-ugu wanaagsan - Rule News
Shan ka mid ah casriga ah jeebka yimaa-ugu wanaagsan
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “Shan ka mid ah casriga ah jeebka yimaa-ugu wanaagsan” waxaa qoray Samuel Gibbs, u theguardian.com on Tuesday 17-November 2015 07.00 UTC
Sanadkan ayaa ahaa ciyaaryahanka ugu fiican weli casriga ah, oo leh waxyaabo kale oo muhiim ah, naqshado fiican oo badan software hagaagayo. Laakiin waxa uu sidoo kale sanadka oo debadda oo waayo-aragnimada sare ma u leeyihiin in ay ku kici dollar sare iyo casriga wanaagsan ma u leeyihiin in ay leeyihiin weyn screens.
Halkan eegno deg deg ah shan ka mid ah casriga ugu wanaagsan ee la heli karo in aad gacantiisa sooma fidiyo?.
The Sony Xperia Z5 Compact ee camera 23-megapixel waa Sony ee ugu fiican weli. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
flagship phone yar Sony ayaa screen 4.6in kiis is haysta in smartphone ugu awood yar oo hadda la heli karo ka dhigaysa a. A scanner faraha degdeg ah oo sax ah adhidibadeed hargahood oo ka yar batoonka dhinaca gacanta midigta ee telefoonka, sidaa darteed looma baahna in ay ku riday fartaada on badhanka guri in lagu furo qalab aad.
The cusub camera 23-megapixel waa Sony ee ugu fiican weli, iyo mid ka mid ah muran ka mid ah ka heli kartaa ugu fiican. Waxay qaadataa kaararka microSD loogu daray kaydinta dheeraad ah iyo telefoonka waa biyuhu moolalka ee 1.5 30 daqiiqo, taasoo la micno ah safar hoos musqusha ma ahan dhamaadkii dunida.
Laakiin waa ay saddex maalmood nolosha batari waa feature dilaaga. Tani waa waarta smartphone ugu dheer-dhamaadka sare ayaa hadda la heli karaa.
Verdict: awood badan ah, smartphone biyuhu soconaysa saddex maalmood u dhexeeya eedeeyay
Sony Xperia Z5 dib u eegis Compact: ayaa muran la'aan ah smartphone ugu wanaagsan ee yar yar
Samsung Galaxy qod6
Khafiif ah, light oo degdeg ah: Samsung Galaxy ee qod6. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Galaxy qod6 waa smartphone ugu horeysay flagship premium-dareen Samsung ayaa la wada-jirka biraha iyo dhalooyinka, iyo kor u ah tallaabo weyn oo design ka dhigan tahay haatan kulan tartanka.
Waa smartphone ugu dhaqsiyaha badan dareen hadda la heli karo, sarawiisha dhexeeya apps iyo Saciira dhex kulan. Waxay leedahay weyn camera 16-megapixel in ka mid ah ugu fiicnaa ee soo baxay waxaa jira a, a fantastic 5.1in 2k screen, waana khafiif ah oo xumbo tartanka.
shidma faraha A hoos button guriga sidani oo telefoonka iyo sugee kartaa lacagta. Waxaa sidoo kale xukun wireless iyo batari ku filan in aad aragto iyada oo maalin.
Verdict: dareen smartphone ugu dhaqsiyaha badan in kaliya ay weheliyaan siibadaha
Dib u eegista Samsung Galaxy qod6: dilaaga iPhone
Processor 70% dhaqso, sawirka faraha cusub scanner - laakiin nolosha batari saboolka ah hoos u ogolaanaysaa ka 6S Apple iPhone. Sawir: Kiichiro Sato / AP
Price: £ 539
6S iPhone waa model ugu dambeeyay 4.7in ka Apple, iyo mid ka mid ah casriga ugu fiican yar laga heli karaa. Waa feature iibinta ugu weyn waa screen xasaasi ah cadaadis, kaas oo u ogolaanaya waji cusub iyo camera 12-megapixel ah in ay qabsadaan karaa Photos Live - weli ka daganayd weheliso shot a video gaaban waqti isku mid ah.
jirka biraha ayaa hadda ka samaysan aluminium a adag in hoos u xagashada. Waxaa processor waa 70% dhaqso badan sanadkii la soo dhaafay. scanner cusub faraha ID Touch Apple waa ku dhawaad ​​degdeg ah, halka ay Engine cusub Taptic saarta warcelin weyn staccato birqaya.
Waa ka biyodiiday ugu weyn waa batari aan socon doonaa maalin, taasoo la micno ah in aad u badan tahay inaan u qaadaan inta lagu jiro maalintii iyo habeenkii.
Verdict: telefoonka weyn iyo mid yar Halaagsamay nolosha batari saboolka ah
iPhone 6s dib u eegis: phone aad u wanaagsan Halaagsamay nolosha batari qashinka
No bloat in 5x Nexus ah. Sawir: Justin Sullivan / Getty Images
Non-phablet dambeeyay Google ee flagship, 5x Nexus ah, waa bedelka ay u Nexus caanka ah 5 ka 2013.
Waxa uu leeyahay screen 5.2in wanaagsan, waa khafiif ah oo khafiif ah oo uu ka mid yahay casriga ah marka hore in uu ordo nooca ugu dambeeya ee Android 6.0 Marshmallow. Telefoonkan, sameeyo LG u Google, waddaa Android jidka Rafaa raadinta waxaa loogu tala galay, aan bloatware oo heli doonaa updates software ka hor inta wax kale.
A shidma faraha degdeg ah oo sax ah oo ku saabsan dib uu ku habboonyahay dabiici ah in aad farta murdisada ka dhabaandhaba inay ibo aad telefoon iyo authenticating lacagaha. Waxa kale oo uu leeyahay USB dekedda ah nooca-C, taasoo la micno ah cable la shidan karo in labada hab ilaa qaadaan. batari The socdaa ku saabsan maalinta a, laakiin aan wax badan ka badan.
camera waa mid ka mid ah ugu wanaagsan ee suuqa iyo waa u fududahay in la isticmaalo in ay la wareegaan sawirada weyn.
Verdict: degdeg ah, iftiinka iyo bloat-free, Jidka Google waxaa loogu tala galay
Dib u eegista Google Nexus 5x: dadka Android phone?
Waa markii saddexaad nasiib ... Motorola ee ugu dambeeyay Moto G. Sawir: Samuel Gibbs ee Guardian ee
Motorola ee saddexaad ee jiilka Moto G weli ugu weyn, oo waa smartphone ugu wanaagsan oo dhan-wareega ah ee ka yar £ 200.
Waxa ay maamushaa Android iyadoo aysan jirin badalaad, waa snappier badan tartanka oo uu helo waxyaabaha aasaasiga saxda ah. Batari soconaysaa maalin wanaagsan, dheeraad ah oo la isticmaalo light, oo dareensan wanaagsan inkastoo ay dareemi qaro weyn dhabarka caag customizable.
Moto G waa biyuhu heerka IP67 ama 1 milyan oo biyo ah 30 daqiiqo, taas oo macnaheedu yahay waxa uu noqon doonaa ganaax haddii aad u da'a qubeyska ama aad qabto roobka.
camera waa awood u qabsaday darbo kor ku celcelis ahaan laakiin waxaa jira booska card microSD waayo, isaga oo intaa raaciyay xasuusta dheeraad ah haddii a 8 ama 16GB dhisay-in kuma filna.
Verdict: dheelitirka ugu wanaagsan ee qiimaha in ay la kulmaan la heli karaa
Motorola Moto G (3rd Gen) dib u eegis: smartphone ugu fiican miisaaniyadda kaliya ladnaaday
technology Mobile waxay slogs baxay dagaalka ku for taam raadraaca
34857	1 Apple, Qodobka, Kumbiyuutar, Google, Internet, iPhone 6s, Telefoonada Mobile, Motorola, Dib u eegida, Samsung, Samuel Gibbs, Telefonada casriga ah, Sony, Technology, Telecoms, Waan isku dayay iyo tijaabiyey
← batari New smartphone qaadi karaan si ay u 48% shan daqiiqo Ma khamriga si dhab ah ka dhigi aad si fiican sariirta? →